SAADAAL CUSUB: Miiska Kama Dambaysta Ah Ee Premier League Oo La Saadaaliyay, Kooxda Horyaalka Qaadaysa, Afarta Sarre & Kuwa Ceebaysan – Laacibnet.net
SAADAAL CUSUB: Miiska Kama Dambaysta Ah Ee Premier League Oo La Saadaaliyay, Kooxda Horyaalka Qaadaysa, Afarta Sarre & Kuwa Ceebaysan
Kaddib mudo lagu soo jiray kulamada caalamiga ah, kubadda cagta horyaalada gaar ahaan mida Premier League ayaa markale soo laabatay iyadoo ay xalay hoggaanka qabatay Tottenham oo uga mahadcelinaysa guul 2-0 ah oo ay ka gaadhay Man City.
Manchester United ayaa sidoo kale gaadhay guusheedii ugu horreysay kulamada horyaalka xilli ciyaareedkan iyagoo 1-0 kaga adkaaday West Bromwich Albion oo iska-caabin weyn samaysay.
Haddaba, waxa ugu weyn ee aynu xilli ciyaareedkan ka baranay ilaa haatan ayaa ah inay adagtahay in saadaalin la sameeyo oo la saadaaliyo kooxda horyaalka qaadaysa iyadoo koobku cidkasta u furan yahay wali, sidoo kale afarta sarre ayaa si baahsan u furan.
Il-wareedka FiveThirtyEight oo saadaalin sameeyay ayaa cusboonaysiiyay aragtidiisa ah sida uu noqon doono miiska kala sarreynta Premier League kaddib 38-ka kulan ee xilli ciyaareedka.
Arrinta cajiibka ah ee saadaashan ku jirta ayaa ah walow ay booska 11-aad imika fadhiyaan in haddana FiveThirtyEight uu hanashada horyaalka u saadaalinayo Manchester City iyagoo u arka kooxda kaliya ee difaacashada koobka ka hor istaagi doonta Man City.
Saddexda kooxood ee afarta sarre la dhammaystiraya Sky Blues ayaa ah Liverpool oo koobka difaacanaysa, Chelsea oo kharash badan gashay suuqii xagaaga iyo Spurs oo imika hoggaanka haya.
Leicester City, Man United iyo Arsenal ayaa seegi doona kubadda cagta Champions League sida saadaashan lagu xusay halka Everton iyo Aston Villa aysan joogtayn doonin qaabka wanaagsan ee ay horyaalka ku bilawdeen.
Saadaasha Oo Dhammaystiran